Afghanistani - ALinks
Ngawaphi amazwe angenayo i-visa kubemi base-Afghanistan?
January 15, 2022 UMaitri Jha Afghanistani , ivisa
Ukuba unayo incwadana yokundwendwela evela Afghanistan, awufuni visa ngaphambi kokuba uye kula mazwe: Bangladesh, Cambodia, Cape Verde, Comoros, Dominica, Guinea-Bissau, Haiti, Madagascar, Maldives, Mauritania, Micronesia, Mozambique, Palau, iRwanda, iSamoa, iSenegal, iSeychelles, iSomalia, iTimor-Leste, iTogo, iTuvalu, neUganda. Ngawaphi amazwe angenayo i-visa yasimahla kubemi baseAfghanistan? Ukuba unayo ipasipoti evela e-Afghanistan, wena
Ungawufumana njani umsebenzi eAfghanistan?
January 8, 2022 IShubham Sharma Afghanistani , imisebenzi
Kubaphambukeli, iAfghanistan inazo zonke iintlobo zamathuba emisebenzi ahlawula kakuhle. Ukubanjwa kukuba, ewe, eAfghanistan, kuya kufuneka usebenze. Ngenxa yethemba lokuhlawulwa kobunzima, baninzi abantu abazimiseleyo
Ungasifaka njani isicelo sokukhuselwa e-Afghanistan
Oktobha 19, 2021 UKaruna Chandna Afghanistani
Ndingummi wase-Afghanistan. Ngaba i-UNHCR ingabhalisa okanye indinike indawo yokukhosela ngaphakathi e-Afghanistan? I-UNHCR inokubhalisa kuphela abemi base-Afghan njengeembacu okanye abafuna indawo yokukhosela xa bengaphandle kwe-Afghanistan kwaye befuna ukhuseleko kwelinye ilizwe. Ukuba
Iibhanki ezigqwesileyo eAfghanistan
Julayi 23, 2021 IShubham Sharma Afghanistani , iibhanki, imali
Iibhanki yenye yezona ndawo zibalulekileyo kuqoqosho lwelizwe. Njengokuba yonke imizila yemali kweli lizwe iya kuphathwa ziibhanki ngokwazo Iibhanki zibaluleke kakhulu kuye wonke umntu, okanye nkqu nakwinkampani. Ukwenzela i
I-Visa yase-US yase-Afghanistan
Julayi 9, 2021 IShubham Sharma Afghanistani , hamba, i-USA, ivisa
I-United States yaseMelika lelona lizwe linamandla ehlabathini. Ikwayenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuphila emhlabeni nangona kubiza kakhulu ukuhlala eMelika. Kukho iifayile ze-
I-Afghanistan Visa yamaNdiya
Novemba 25, 2020 UAntika Kumari Afghanistani , ivisa
Abemi baseIndiya kufuneka be-visa ukuya e-Afghanistan njengabakhenkethi. Ilizwe livulelekile ukuhamba ngeengcebiso zokuhamba ze-COVID. Ngexesha leentsuku ezingama-30, ukuhlala kuhlala kufutshane, kwaye i-visa iphelelwa ngeentsuku ezingama-90. Nini
Ufunde kwiDyunivesithi kwiAfghanistan
Aprili 22, 2020 UAntika Kumari Afghanistani , isifundo
Kuya kufuneka ufunde ukuba yeyiphi na iiyunivesithi ezifanelekileyo kuwe ukuba ufuna ukufunda eAfghanistan. Ukuba kunjalo, ufuna ukufunda kwiiyunivesithi zaseAfghanistan. Emva koko, isigqibo esibalulekileyo kukukhetha indawo yokufunda. Siye
Inkqubo yempilo eAfghanistan.
Aprili 20, 2020 UAntika Kumari Afghanistani , impilo
Iminyaka yemfazwe yamakhaya iyitshabalalisile inkqubo yezempilo kwaye ngokungafani namanye amazwe, izifo ezinjengesifo sohudo kunye nezifo zokuphefumla ziye zenyuka eAfghanistan. Ngokuka The World Bank, malunga nomntwana omnye kwabalishumi uza kufa phambi kokuba bafike